Soomaaliya iyo Kenya oo ku Heshiiyey dib u howlgelinta danjirayaashooda+Sawirro
Wednesday April 03, 2019 - 23:56:04 in Wararka by Super Admin
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa maanta Magaalada Nairobi kula kulmay dhiggiisa Kenya Danjire Monica Juma.
Labada Wasiir ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal, xal u helidda is-fahamwaagii bilahan u dhexeeyay labada dal iyo arrimo kale.
Wasiir Cawad ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Kenya kaalinta walaalnimada leh ee ay Kenya ka qaadatay dib u dhisidda qarannimada Soomaaliya, taageeradeeda fagaarayaasha caalamiga ah , marti gelinta qaxootiga Soomaaliyeed iyo kaalinteeda howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Labada Wasiir ayaa isla gartay in xiriirka labada dal lagu celiyo halkii uu joogay ka hor is-fahamwaagii labada dal soo kala dhex galay bishii Febaraayo, ayadoo Wasiir Cawad uu u caddeeyay dhiggiisa in Soomaaliya ay u aragto Kenya walaal dhab ah oo mar walba garab taagan Soomaaliya.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya ayaa la wadaagay dhiggiisa Kenya duqeyn ay ciidammada Kenya u geysteen dhowr xarumood oo ay lahaayeen shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya oo ku yaalla gudaha Soomaaliya. Wasiir Juma ayaa ballan qaadday in ay eegi doonaan arrintaasi, ayna ka soo jawaabi doonaan.
Ugu dambayn, labada Wasiir ayaa isku raacay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay labada dal dib u howlgeliyaan safiiradoodii Nairobi iyo Muqdisho si ay howlahooda u sii wataan. Sidoo kale labada wasiir ayaa isla soo hadal qaaday khatarta kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab, ayagoo isku raacay in la xoojiyo dagaalka lagula jiro.